Mareykanka oo sheegay magaca askarigii lagu dilay gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay magaca askarigii lagu dilay gudaha Soomaaliya
May 7, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Askariga la dilay Kyle Milliken . [Sawirka: Twitter]
Washington-(Puntland Mirror) Waaxda Difaaca Mareykanka ayaa aqoonsatay askari Mareykan ah kaasoo lagu dilay gudaha Soomaaliya asbuucii lasoo dhaafay.
Bayaan kasoo baxay Waaxda Difaaca ayaa lagu sheegay in Kyle Milliken oo 38-sanno jir ah lagu dilay intii lagu guda jiray howlgal ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay meel baadiye ah oo 45 km dhanka galbeedka uga beegan magaalada Muqdisho.
Waa askarigii ugu horeeyay oo Mareykan ah oo ku dhinta dagaal gudaha Soomaaliya tan iyo sanadkii 1993, markii ciidamo Mareykan ah ay la dagaalamneen maleeshiyo maxali ah oo uu hoggaaminayay Janaraal Maxamed Faarax Caydiid, ugu yaraan 18 askari oo Mareykan ah ayaa lagu dilay dagaakaas.
Bishii laga soo gudbay, tobonaan katirsan askarta Mareykanka ayaa yimid gudaha Soomaaliya si ay tababar iyo qalabayn ugu sameeyaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo gudaha Soomaaliya kula dagaalamaya ururka hubaysan ee Al-Shabaab.